SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Guarani Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kirundi Korean Latvian Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese
“MUMWE mukadzi muKristu achitaura nezvezvikanganiso zvaakaita kare akanyora kuti: “Handina kumbobvira ndafunga kuti Jehovha angandikanganwira, uye ndaifunga kuti ndaizongoramba ndichizvitongesa kwoupenyu hwangu hwose.” Chokwadi kana hana yako iine mhosva zvinoita sokuti wakatakura mutoro unorema. Zvisinei, Bhaibheri rine mashoko anonyaradza anogona kunyevenutsa kunetseka kunenge kuchiita vatadzi vanenge vapfidza. Ngatimbokurukurai mashoko omunyori wepisarema Dhavhidhi anowanikwa pana Pisarema 103:8-14.
Dhavhidhi aiziva kuti “Jehovha ane ngoni” uye kuti ‘haazorambi achitiwanira mhosva.’ (Ndima 8-10) Kana Mwari akaona zvakakodzera kunzwira ngoni, anozviita nomwoyo wose. Dhavhidhi uyo aiva nyanduri wemandorokwati, akashandisa fananidzo nhatu achienzanisa kukura kwakaita ngoni dzatinoratidzwa naMwari.
“Sokukwirira kwakaita matenga kupfuura nyika, ndizvo zvakaita ukuru hwomutsa wake worudo kune vaya vanomutya.” (Ndima 11) Zvakaoma kuedza kufungidzira daro riripo kubva pasi pano kusvika kunyeredzi. Saka apa Dhavhidhi ari kutibatsira kunzwisisa kukura kwakaita ngoni dzaJehovha idzo dzinoratidza rudo rwake. Imwe nyanzvi yakati ngoni idzi dzinoratidzwa “vaya vanotya” Mwari kana kuti vaya vane “mwoyo unozvininipisa uye vanoremekedza chinzvimbo chake.”
“Sokuva kure kwakaita kunobuda zuva kubva kumavirira, saizvozvowo akaisa kudarika kwedu kure nesu.” (Ndima 12) Dzimwe shanduro dzeBhaibheri dzinoti, “sezvakaita mabvazuva ari kure namadokero.” Kubva kumabvazuva kusvika kumavirira pakamboreba sei? Kuresa zvatisingagoni kufungidzira. Rimwe duramazwi reBhaibheri rinotaura pfungwa yokuti munhu paanofamba achienda kumabvazuva anenge achitowedzera kuenda kure nemadokero. Zvairehwa naDhavhidhi pano ndezvokuti kana Mwari akanganwira zvivi zvedu anobva azviisa kure kure chaizvo nesu.
“Sezvinoita baba vanonzwira ngoni vanakomana vavo, Jehovha akanzwira ngoni vaya vanomutya.” (Ndima 13) Dhavhidhi aiziva kuti baba vane rudo vanonzwa sei mumwoyo mavo sezvo iye aivawo nevana. Baba vakadaro vanonzwira tsitsi vana vavo kunyanya vana vacho pavanenge vachishushikana. Dhavhidhi anotivimbisa kuti Baba vedu vokudenga vane rudo vanonzwira ngoni vana vavo vari pasi pano, kunyanya vanenge vapfidza vane “mwoyo wakaputsika nowakapwanyika” zvichikonzerwa nezvivi zvavakaita.—Pisarema 51:17.
Pashure pokunge ataura fananidzo idzi nhatu, Dhavhidhi anotaura chinhu chinoita kuti Jehovha anzwire ngoni vanhu vanotadza achiti: “Iye anonyatsoziva maumbirwo atakaitwa, achiyeuka kuti tiri guruva.” (Ndima 14) Jehovha anoziva kuti takasikwa neguruva saka pane zvatisingakwanisi kuita. Jehovha achiyeuka kuti tiri vanhu vanotadza, ‘akagadzirira kutikanganwira’ kana tichinge taratidza kuti tapfidza zvechokwadi.—Pisarema 86:5.
Haubayiwi mwoyo here nemashoko aDhavhidhi pamusoro pengoni dzaJehovha? Mukadzi ataurwa pakutanga akadzidza zvinotaurwa neBhaibheri zvokuti Jehovha akagadzirira kukanganwira. Akabva ataura mashoko okuti: “Ndava kutanga kunzwa kuti zvinoita kuti ndinyatsoswedera pedyo naJehovha uye ndava kunzwa sokuti mutoro uya wabviswa pandiri.” * Wadii kudzidza zvakawanda nezvengoni dzaMwari uye kuti unganzwirwa sei ngoni idzodzo? Pamwe newewo unogona kuzonzwa sokuti wabvisirwa mutoro unorema.
Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna August:
▪ Pisarema 87-118
^ ndima 7 Ona chitsauko 26 chinoti “Mwari ‘Akagadzirira Kukanganwira,’” mubhuku rinonzi Swedera Pedyo naJehovha rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
[Mashoko okukwezva vaverengi ari papeji 13]
“Ndava kutanga kunzwa kuti zvinoita kuti ndinyatsoswedera pedyo naJehovha uye ndava kunzwa sokuti mutoro uya wabviswa pandiri”
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Anoyeuka Kuti “Tiri Guruva”